သင်မသိသေးသော နေထူးနိုင်အကြောင်း – Cele Channel
မင်းသားနေထူးနိုင်ဟာ ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ကားတွေကို တချို့လူတွေက ဟာသ အနေဖြင့် Troll တဲ့အချိန်မှ စ၍ နေထူးနိုင်ရဲ့ အောင်မြင်မှု့ဟာလည်း လုံးဝကို ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ် ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတော့ အောက်က ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး သင်သဘောပေါက်မှာပါ။
[email protected] MAL GYI
မြန်မာကို ဒါမျိုးလာကြောလို့ ဘယ်ရမလဲ
Posted on December 6, 2017 Author Cele
အမေရိကန် တိုးရစ် တစ်ယောက် မြန်မာပြည် သို့ ရောက်လာခဲ့ ပြီးနောက် Taxi တစ်စီး ငှားစီး လေသည် ။ Driver ကတော့ မြန်မာလူမျိုး ပေါ့ တံတား တစ်ခုနား ရောက်တော့ တိုးရစ်ကြီးက ” အဲ့တာ ဘာ တံတားလဲ ” ”ဘုရင့်နောင် ဂုံးကျော် တံတားပါ” ” ဆောက်တုန်းက ဘယ်လောက် ကြာလဲ ” ”တစ်နှစ် ကြာပါတယ် ခင်မျာ” ”အင်း တို့ဆီ မှာဆို ၆ လ နဲ့ အပြီး ဆောက်နိုင်တယ်” ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်ခုကို ရောက်တော့ ” အဲ့တာရော ဘာ တံတားလဲ ” ” ရွှေဂုံတိုင် ဂုံးကျော် […]
Posted on September 19, 2017 Author Cele
အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုိးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင်ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ ထူးဆန်းနေတာပေ့ါ…. ဒါနဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူးတယ်… …. “အမကြီးရယ်…. အိမ်ထောင် သုံးခါကျတာတောင် အပျိုစင်ပဲဆိုတော့ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိပါရစေ” “ဒီလိုပါ… ပထမယူတဲ့ အမျိုးသားက သွေးတိုးရောဂါရှိတယ်၊ မင်္ဂလာဦင်္းညမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျော်လွန်ပြီး မူးလိုက်တာ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး သေပါလေရော” “အော်…. ဒုတိယအိမ်ထောင်ကျတော့ရော…” “ဒုတိယယူတဲ့ စစ်ဗိုလ်လေးက မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ပဲ ရှေ့တန်းထွက်သွားတာ၊ ပြန်မလာတော့ဘူးလေ” “အော်… နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ရော… မင်္ဂလာဦးညမှာပဲ ကွဲသွားပြန်တာလား” “ခုထိ ပေါင်းနေပါသေးတယ် ကွယ်” “ဒါ… ဒါဆို ဘယ်လိုဖြစ်လို့ … ” “သူက… ဖေ့စ်ဘုတ်ခရေဇီလေ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးကတည်းက ညဘက် ညဘက် မအိပ်တန်း […]
မောင်​ မပြီး​သေးဘူးလားကွာ အာ​တွေ​တောင်​​ညောင်းလာပြီ
Posted on October 25, 2017 Author Cele
မောင်​ မပြီး​သေးဘူးလားကွာ အာ​တွေ​တောင်​​ညောင်းလာပြီ ပြီး​တော့ ​မောင့်​ဟာကြီးက တိုတိုတုတ်​တုတ်​ကြီးဆို​တော့ မနည်းထိန်းမူတ်​​နေရတယ်​ တစ်​ဆုံးကပ်​မူတ်​​လေ​လေ နံလာ​လေ​လေပဲ မျက်​ရည်​​တောင်​ဝဲတယ်​​မောင်​ရယ်​” သူမ ကျ​နော်​ဟာ​လေးကိုပါးစပ်​က အသာခွာရင်း ကျ​နော့မျက်​နှာဘက်​ကို​မော့ကြည့်​ကာ ခပ်​ငြီးငြီး​လေး ​ပြောလိုက်​သည်​။ ”ချစ်​ကလည်းကွာ ပြီး​တော့မှာပါကွ ​ မောင်​ပြီး​တော့ တလှည့်​မူတ်​မယ်​ ဟုတ်​ပြီလား” သူမ ဆတ်​ခနဲ နူတ်​ခမ်းအသာစူရင်း ကျ​နော့ဟာ​လေးပါးစပ်​နားပြန်​​တေ့ပြီး ကုန်းကုန်းမူတ်​ပါ​လေ​တော့တယ်​ ကျ​နော်​လည်း ထင်းကိုခပ်​သွက်​သွက်​ခွဲပြီး ​​ တွေ့ရာဝါးလုံးအ​ပေါက်​​ဖောက်​ မီး​ပြောင်းလုပ်​​ပေးမိ​သောကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ကျိန်​ဆဲမိသည် ချစ်​သူပင်​ပန်းတာမကြည့်​ရက်​သည့်​အဆုံး ”​ပေး​ပေး မီး​ပြောင်း ​​ မောင်​ပဲ မီးတောက်​​အောင်​ဆက်​မူတ်​လိုက်​​တော့မယ်​ မီးခိုးမွှန်​လို့ကျ​တဲ့မျက်​ရည်​​တွေသွားသုတ်​​ချေ”’ မိုးကရွာ ထင်းကစိုနဲ့ ဒီလိုပါပဲ လျှပ်​စစ်​မီးမရတဲ့ ကျုပ်​တို့​တောသူ​တောင်​သားတွေဆိုတာ ရထားတဲ့မိန်းမကလည်း ဘာမှမလုပ်တတ်မီးကို မမွှေးတတ်ဘူးလေ   Credit ======== မောငျ​ မပွီး​သေးဘူးလားကှာ အာ​တှေ​တောငျ​​ညောငျးလာပွီ ပွီး​တော့ […]
ကျွန်​​တော်​တို့ မိသားစုက တော်​​တော်​ချို့တဲ့တာဗျ ဘယ်​​လောက်​​တောင်လဲ ဆိုရင်​အိမ်​မှာပိုက်ဆံ​ကလွဲရင်​တခြားဘာမှမရှိဘူး
ယနေ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရန်ကုန်က ပုံပါ နန်းပြားသုတ် ၁ ပွဲ ၃၄၅၀ ကျပ်